Amaokwu Bible dị ike iji nyere gị aka inwe ndidi | Ahụrụ m Jizọs n'anya
di Paolo Tescione - Jenụwarị 4, 2021
Adultsmụ nwoke toro na-agụ Akwụkwọ Nsọ site n’ịtụ aka na agwa na ikesara ndị ntorobịa ozi-ọma. Obe akara, na-egbukepụ egbukepụ na akwụkwọ ndị dị na Bible, Concepts of Christianity.
E nwere ilu ilu n’ezinaụlọ Ndị Kraịst sị: “Ndidi bụ agwa”. Mgbe a na-ekwukarị ya, okwu a anaghị ekwu na ọ dị onye na-ekwu okwu mbụ, ọ nweghịkwa nkọwa maka ihe kpatara ndidi ji bụrụ omume ọma. A na-ekwukarị okwu nkwekọrịta a iji gbaa mmadụ ume ichere maka nsonaazụ ọchọrọ ma ghara ịnwa ịmanye otu ihe omume. Rịba ama, ahịrịokwu ahụ ekwughi: "ichere bụ omume". Kama nke ahụ, ọdịiche dị n'etiti ichere na inwe ndidi.
E nwere nkọwa banyere onye edemede nke see okwu. Dị ka ọ na-adịkarị na akụkọ ihe mere eme na akwụkwọ, ndị na-eme nchọpụta nwere ọtụtụ ndị na-enyo enyo gụnyere onye edemede Cato the Elder, Prudentius, na ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na ahịrịokwu ahụ n’onwe ya esighi n’Akwụkwọ Nsọ, enwere eziokwu Akwụkwọ Nsọ na nkwupụta ahụ. E kwuru na ndidi dị ka otu n’ime àgwà ịhụnanya n’isi nke iri na atọ nke Ndị Kọrịnt.
“Ishụnanya nwere ogologo ntachi obi, ịhụnanya nwere obiọma. Hụnanya adịghị enwe anyaụfụ, ọ naghị etu ọnụ, ọ naghị etu ọnụ. "(1 Ndị Kọrịnt 13: 4)
Site na amaokwu a tinyere nkọwa nke isi ahụ dum, anyị nwere ike ịchọpụta na ndidi abụghị naanị ichere, kama ichere na-enweghị mkpesa (ịchọ onwe onye). N'ihi ya, ndidi bụ omume ọma ma nwee ihe ọ pụtara n'Akwụkwọ Nsọ. N'inwe nghọta doro anya karị banyere ndidi, anyị pụrụ ịmalite ịchọ Bible maka ihe atụ na otú omume a si emetụta ichere.
Gịnị ka Akwụkwọ Nsọ na-ekwu banyere ndidi ma ọ bụ ichere n'ime Onyenwe anyị?
Akwụkwọ nsọ nwere ọtụtụ akụkọ gbasara ndị mmadụ na-eche Chukwu akụkọ ndị a sitere na njem afọ iri anọ nke ụmụ Israel nọrọ n’ọzara, rue na Jizọs na-eche ka e were ya chụọ aja na Calvary.
"Maka ihe ọ bụla nwere oge na oge maka nzube ọ bụla n'okpuru eluigwe." (Eklisiastis 3: 1)
Dị ka oge a na-eme kwa afọ, anyị ga-echere ka anyị hụ akụkụ ụfọdụ nke ndụ. Mụaka na-eche itolite. Ndị okenye na-echere ịka nká. Ndị mmadụ na-eche ịchọta ọrụ ma ọ bụ na ha na-eche ịlụ di na nwunye. N'ọtụtụ ọnọdụ, ichere ahụ karịrị ike anyị. N'ọtụtụ ọnọdụ, ichere anaghị achọ. Otu ihe juru agụụ afọ na-emetụta ụwa taa, ọkachasị ọha mmadụ America. Ozi, shoppingzụ ahịa n'ịntanetị na nkwukọrịta dị na mkpịsị aka gị. Ọ dabara nke ọma, Akwụkwọ Nsọ agbanweela echiche a n'echiche nke ndidi.
Ebe ọ bụ na Akwụkwọ Nsọ na-ekwu na ndidi na-echere na-enweghị mkpesa, Akwụkwọ Nsọ mekwara ka o doo anya na ichere ihe siri ike. Akwụkwọ Abụ Ọma na-enye ọtụtụ akụkụ nke mkpesa maka Onyenwe anyị, na-ekpe ekpere maka mgbanwe - gbanwee oge ọchịchịrị ka ọ bụrụ ihe na-enwu gbaa. Dika Devid gosiputara na Abu Oma nke ato ka o na-agba oso nwa ya nwoke bu Absalom, o kpere n’ekpere zuru oke na Chineke ga-anaputa ya n’aka ndi iro. Ihe odide ya adighi adi nma mgbe nile. Abụ Ọma nke 3 gosipụtara obi nkoropụ ka ukwuu, mana ọ kwụsịrị na ntụkwasị obi na Chineke. Ichere na-abụ ndidi mgbe ntụkwasị obi metụtara.
David ama ọbọn̄ akam etịn̄ se ikanamde Abasi okop ndobo, edi enye ikayakke oro anam enye etre ndikpono Abasi. Ọ bụ ezie na ndụ ga-esi ike nke ukwuu, oge ụfọdụ ọ ga-eweta obi nkoropụ, Chineke na-enye azịza nke oge, ekpere. N'ikpeazụ, ọ ga-elekọta ndị ọzọ. Mgbe anyị na-ahọrọ inye Chineke ikike kama ịlụ ọgụ maka onwe anyị, anyị ga-amalite ịlele Jizọs anya nke kwuru, "ọ bụghị uche m, kama ka emee nke gị" (Luk 22:42).
Zụlite omume ọma a adịghị mfe, mana ọ ga-ekwe omume. Lee amaokwu Baịbụl iri abụọ ga-enyere gị aka inwe ndidi.
Amaokwu Baịbụl 20 gbasara ndidi
“Chineke abụghị mmadụ, onye na-agha ụgha, Ma ọ bụ na o kwuru na ọ gaghị eme ya? "(Ọnụ Ọgụgụ 23:19)
Okwu Chineke emeghi ka ndi Kristain nwee echiche, kama o bu eziokwu. Mgbe anyị tụlere eziokwu Ya na ụzọ nile O kwere nkwa ịkwado Ndị Kraịst, anyị nwere ike ịhapụ obi abụọ na ụjọ niile. Chineke anaghị agha ụgha. Mgbe ọ na-ekwe nkwa mgbapụta, ọ na-ekwu nke ahụ kpọmkwem. Mgbe Chineke na-enye anyị nzọpụta, anyị nwere ike ikwere ya.
“Ma ndi n hopele anya Onye-nwe-ayi g willme ka ike-ha di ọhu; ha ga-efego elu na nkù dika ugo; ha ga-agba ọsọ ma ike agaghị agwụ ha; ha g willje ije ma ghara ida. "(Aịsaịa 40:31)
Uzo nke ichere Chineke n’aha anyi bu na o kwere nkwa mmeghari ohuru. Ọnọdụ anyị agaghị emeri anyị karịa ma anyị ga - abụ ezigbo mmadụ na usoro ahụ.
"N'ihi na ekwere m na ahụhụ nke oge ugbu a erughị ka e jiri ya tụnyere ebube nke a ga-ekpughere anyị." (Ndị Rom 8:18)
Nhụjuanya anyị niile gara aga, nke ugbu a na nke ọdịniihu na-eme ka anyị yie Jizọs.na agbanyeghị ka ọnọdụ anyị jọrọ njọ, ebube na-esote bụ ebube n’eluigwe. N’ebe ahụ, anyị agakwaghị ata ahụhụ.
“Onye-nwe-ayi di nma diri ndi n whole anya Ya, Ya na nkpuru-obi nke nāchọ Ya. (Abụ 3kwá 25:XNUMX)
Chineke ji onye nwere ndidi chere echiche. Ndi ahu bu ndi nuru okwu Ya mgbe O nyere ayi iwu ka ayi chere.
"Mgbe m hụrụ eluigwe gị, ọrụ mkpịsị aka gị, ọnwa na kpakpando, nke ị debere n'ọnọdụ ha, gịnị bụ mmadụ nke na-echeta ya, Nwa nke mmadụ na-elekọta ya?" (Abụ Ọma 8: 3-4)
Chineke ji nlezianya lekọta anyanwụ, ọnwa, kpakpando, mbara ala, ụwa, anụmanụ, ụwa na oke osimiri nwayọ. Gosipụta otu nlekọta miri emi na ndụ anyị. Chineke n’arụ ọrụ Ya, na-agbanyeghị na anyị kwesịrị ichere Chineke, anyị ma na Ọ ga-eme ihe.
“Jiri obi gị dum tụkwasị Onyenwe anyị obi, adaberekwala na nghọta gị. Mara ya n'ụzọ gị niile, ọ ga-emekwa ka ụzọ gị kwụrụ ọtọ. " (Ilu 3: 5-6)
Mgbe ụfọdụ, ọnwụnwa na-eduga anyị n’ịchọ idozi nsogbu anyị. Ma mgbe ụfọdụ Chineke chọrọ ka anyị jiri ikike ime ihe iji meziwanye ndụ anyị. Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ihe ná ndụ anyị na-enweghị ike ịchịkwa, ya mere, ọtụtụ oge anyị ga-adabere n'omume Chineke karịa nke anyị.
“Chere Jehova, debekwa ụzọ Ya, ma Ọ ga-ebulie gị inweta ala ahụ; ị ga-ele anya mgbe a ga-ebipụ ndị na-emebi iwu. ” (Abụ Ọma 37:34)
Ihe nketa kasịnụ nke Chineke nyere ụmụazụ Ya bụ nzọpụta. Nke a abụghị nkwa e kwere mmadụ niile.
"Site n'oge ochie ọ dịghị onye nụrụ ma ọ bụ nụ ntị na ntị, ọ dịghị anya hụtụrụla Chineke ma ewezuga gị, onye na-emere ndị na-echere ya". (Aịzaya 64: 4)
Chineke ghọtara anyị nke ọma karịa ka anyị nwere ike ịghọta. Onweghi uzo esi kwuputa otu oga esi agozi anyi ma obu na anyi agagh enweta ya ruo mgbe anyi natara ngozi ahu n’onwe ya.
"Ana m echere Onyenwe anyị, mkpụrụ obi m na-eche, n'okwu ya m na-atụ anya ya". (Abụ Ọma 130: 5)
Ichere ihe siri ike, mana okwu Chineke nwere ikike inye udo dịka anyị n'eme ya.
“Ya mere wedanụ onwe unu ala n'okpuru aka dị ike nke Chineke, ka O wee welie unu elu n'oge nke Ya” (1 Pita 5: 6)
Ndị mmadụ na-anwa ijikwa ndụ ha na-enweghị enyemaka Chineke anaghị ekwe ka ha nye ịhụnanya, nlekọta na amamihe. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka Chineke nyere anyị aka, anyị kwesịrị ibu ụzọ dịrị umeala n’obi.
Ya mere, unu echeb anxiousula onwe-unu nye echi, n'ihi na echi g aboutcheb abouturu onwe-ya. Ughbọchị zuru ezu bụ nsogbu ya. "(Matiu 6:34)
Chineke na-akwado anyị kwa ụbọchị. Ọ bụ ezie na Ọ bụ maka echi, anyị ga-aza maka taa.
"Mana ọ bụrụ na anyị nwere olile anya maka ihe anyị na-ahụghị, anyị ga-eji ndidi chere ya." (Ndị Rom 8:25)
Olileanya chọrọ ka anyị jiri ọ joyụ na-elepụ anya n'ihu maka ohere dị mma. Uche na enweghi ndidi naenye onwe ya ohere di iche.
“Na-ajoụrịnụ ọ hopeụ n’olileanya, nwee ndidi n’ime mkpagbu, na-ekpe ekpere mgbe niile”. (Ndị Rom 12:12)
Enweghi ike izere nhụjuanya na ndụ a maka Onye Kraịst ọ bụla, mana anyị nwere ikike iji ndidi jiri ntachi obi na-atachi mgba anyị ruo mgbe ha gafere.
“Ma ugbua, Onyenwe anyị, gịnị ka m na-eche? Olile-anyam di na Gi. "(Abụ Ọma 39: 7)
Ichere di nfe mgbe anyi matara na Chukwu ga akwado anyi.
"Onye nwere oke iwe na-akpali esemokwu, mana onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ na-eme ka ịlụ ọgụ sie ike." (Ilu 15:18)
N'oge esemokwu, ndidi na-enyere anyị aka ijikwa ụzọ anyị si agwa ibe anyị okwu nke ọma.
“Njedebe okwu dị mma karịa mmalite ya; mmụọ ndidi nwere mmụọ dị mma karịa mmụọ mpako “. (Eklisiastis 7: 8)
Ndidi na-egosipụta obi umeala, ebe mmụọ mpako na-egosipụta mpako.
"Onye-nwe-ayi g fightburu unu agha, unu gādi kwa nkiti". (Ọpụpụ 14:14)
Ihe omuma nke Chineke nke nekwagide ayi na eme ka anyi nwekwuo ndidi.
"Ma buru ụzọ chọọ alaeze Chineke na ezi omume ya, a ga-atụkwasịkwara gị ihe ndị a niile." (Matiu 6:33)
Chineke ma ihe obi anyị chọrọ. Ọ na-anwa inye anyị ihe ndị ọ masịrị ya, ọbụlagodi na anyị ga-echere ịnata. Anyị na-anatakwa naanị site na mbụ ịkwado onwe anyị na Chineke.
"Nwaamaala anyị nọ n'eluigwe, ma site ebe ahụ anyị na - ele anya Onye nzọpụta, Onyenwe anyị Jizọs Kraịst." (Ndị Filipaị 3:20)
Nzọpụta bụ ahụmịhe na-abịa mgbe a nwụsịrị, mgbe ị bichara ndụ ikwesị ntụkwasị obi. Anyị ga-echere ụdị ahụmịhe ahụ.
"Ma mgbe ị tasịrị ahụhụ ntakịrị, Chineke nke amara niile, onye kpọrọla gị n'ebube ebighị ebi ya n'ime Kraịst, ga-eweghachi gị, kwenye, wusie ike ma mee ka onwe ya guzosie ike." (1 Pita 5:10)
Oge na-arụ ọrụ dị iche iche maka Chineke karịa ka ọ na-arụ maka anyị. Ihe anyị na-atụle ogologo oge, Chineke nwere ike ịtụle ihe dị mkpirikpi. Mana, O na-aghota ihe mgbu anyi, Ọ ga-akwadokwa anyi ma oburu na anyi ejiri ndidi na icho Ya.
Gịnị mere Ndị Kraịst ji kwesị inwe ndidi?
Agwawom unu ihe ndia ka unu we nwe udo nimem. Ga-ata ahụhụ n’ụwa a. Nwee obi ike! Emeriwo m ụwa. "(Jọn 16:33)
Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya mgbe ahụ ma gaa n'ihu na-agwa ndị kwere ekwe taa site na Akwụkwọ Nsọ, na ndụ, anyị ga-eche nsogbu ihu. Anyị enweghị ike ịhọrọ ndụ na-enweghị nsogbu, nhụjuanya ma ọ bụ ihe isi ike. Ọ bụ ezie na anyị enweghị ike ịhọrọ ma ndụ ọ̀ ga-agụnye ahụhụ ma ọ bụ na ọ gaghị, Jizọs na-agba ume inwe echiche ziri ezi. O meriri ụwa ma kee eziokwu maka ndị kwere ekwe ebe udo ga-ekwe omume. Na agbanyeghi na udo na ndu bu ihe ebighebi, udo di nelu igwe ebighi ebi.
Dị ka Akwụkwọ Nsọ gwara anyị, udo bụ akụkụ nke echiche ime ndidi. Ndị ahụ nwere ike ịta ahụhụ ka ha na-echere Onyenwe anyị ma na-atụkwasị obi na Ya ga-enwe ndụ ndị na-anaghị agbanwe nke ukwuu nịịle mkpagbu. Kama, ezigbo oge ha jọrọ njọ agaghị adịkwa iche iche n’ihi na okwukwe na-eme ka ha guzosie ike. Ndidi n’enye ndi Kristian ohere ihu oge ndi siri ike n’enwegh obi abua na Chineke. Ma nke kacha nke bụ na ndidi na-enye anyị ohere ibi ndụ dịka nke Jizọs.
Mgbe ọzọ anyị zutere ọnọdụ siri ike ma tie mkpu dịka ndị ọbụ abụ, anyị pụrụ icheta na ha tụkwasikwara Chineke obi.Ha ma na nnapụta Ya bụ nkwa na ọ ga-abịa n'oge. Naanị ihe ha kwesịrị ime bụ na ihe anyị kwesịrị ime bụ ichere.